Posted by ကိုတုတ်ကြီး at 2:27 PM
မိုးဟေကို မင်းရဲ့ စောက်ဖုတ်နဲ့ ဖင်ကို အရမ်းလိုးချင်တယ်ဟာ....
Anonymous September 16, 2012 at 8:56 AM
ကျုပ်ဆို ၁၀ ခါလောက်ဆက်တိုက်လိုးချင်လိုက်တာ ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့
Rocker Zaw Gyi February 22, 2019 at 6:00 AM
မမ အိမ့်သဇင်. September 15, 2012 at 12:53 AM
မိုးဟေကို မင်းရဲ့ စောက်ဖုတ်နဲ့ ဖင်ကို အရမ်းလိုးချင်တယ်ဟာ..
KPHYO September 25, 2012 at 12:43 AM
ငါကတော့ ပါးစပ်ကိုပဲလိုးချင်တယ်စောက်ဖုတ်နဲ့ ဖင် ကသူများတွေလိုးနေလို့ 
KPHYO September 25, 2012 at 12:47 AM
ပွင့် ဖြူရေဖြူတွင်းက ကြည်ခိုင်ကလည်းလိုးချင်လို့ တဲ့ 
khaing soe January 7, 2013 at 11:24 AM
မိုးဟေကိုကတစ်ခုတော့ ကောင်းတယ်ကွ သိလား?
ညောင်ရမ်းသားတွေက အင်တာနက်ဆို ဒါပဲကြည့်တတ်တာ
ညောင် ရမ်းက ကောင်တွေ အကုန်လုံးဖင် ခံကွာ
မင်းတို့ညီမ တွေ အ မေ အကုန်လုံး ဖင် ဘူးတောင်း
ထောင်ပြီးလိုးမယ် ညောင် ရမ်းသားအမိန့်တဲ့ စောက်ရူး
ညောင် ရမ်းသား စောက်ပေါတွေ ဖင် လိုးသတ်ပစ်မယ်
myo May 20, 2013 at 6:35 AM
snow love July 16, 2013 at 9:05 AM
မင်း တို့ အရူးတွေပဲ မိန်းမတယောက်ရဲ့ပုံမြင်တာနဲ့ ဒီလောက်ဖြစ်နေရင်မင်းတို့နဲ့ အတူနေတဲ့မအေ အမတွေ မင်းတို့ ဘာမြင်လဲ ခွေးသားတွေ
ceootoo August 16, 2013 at 7:50 PM
monayechan chan September 12, 2013 at 8:00 AM
ုပြည်အချစ်ဖူးဖူး ပြည်အချစ်ဖူးဖူး September 21, 2013 at 4:05 AM
Anonymous September 22, 2013 at 6:25 AM
baby small September 25, 2013 at 8:40 PM
ဖြစ်နိုင်ရင် တစ်ညလုံး မ ကိုယ်လုံးလေးပေါ်မှာ မနားတမ်း ကစားချင်တာ
ကောင်းကောင်း September 28, 2013 at 9:18 PM
မလှပေမဲ့ ချချင်တဲ့ လီး ထောင်နေတဲ့ ဂျို စောင့်လိုက်ပါဦး
မိုး ဟေ ကို
raylwin12345@gmail.com October 18, 2013 at 5:50 AM
raylwin12345@gmail.com October 18, 2013 at 5:52 AM
raylwin12345@gmail.com October 18, 2013 at 5:53 AM
raylwin12345@gmail.com October 18, 2013 at 5:55 AM
raylwin12345@gmail.com October 18, 2013 at 5:57 AM
raylwin12345@gmail.com October 18, 2013 at 6:00 AM
raylwin12345@gmail.com October 18, 2013 at 6:23 AM
မြန်မာ မ လေးတွေ ဘိုလီးနဲ့တွေ့ပါစေ
Sut Nan November 15, 2013 at 12:10 AM
မိုးဟေကိုရယ်မင်းနှဲ့တူတူအိပ်ပြီးလိုးရရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲ။မင်းရဲ့နှတ်ခမ်းကိုစုတ် နုိ့ကိုကစားပေး ခါးကိုဖက် ဘေ့ကိုချွတ်အဖုတ်ကိုနှုိက် စောက်ဖုတ်ကိုလည်းမုတ်ပေးမယ် ငါ့ကိုလည်းစုတ်ပေး လေးဘက်ကုန်းစိတ်ကြိုက်လိုးဆောင့်ထည့်မိုးဟေအော်ကောင်းမှကောင်း
အာကာ May 18, 2014 at 12:51 AM
buddhist May 24, 2014 at 6:16 PM
ဖြစ်​ပြီးရင်​ပျက်​သွားတာကို နားမလည်​​သေးလို့ မိုက်​​နေကြတာပဲ..အလကားအကုသိုလ်​ယူတယ်​.....
Thein Soe Win May 28, 2014 at 3:15 AM
စိုးသူရ အောင် May 31, 2014 at 2:17 PM
Ei Phu Pyo November 7, 2014 at 6:12 PM
Ei Phu Pyo November 7, 2014 at 6:15 PM
စောက်ကောင်မမိုးဟေကိုကကြေးစားကြီးကွမင်းတို့တွေကအကုန်ငတုံးတွေကြည့်ဘဲ ဒါပေမယ့်မိုးဟေကိုစောက်ဖုတ်ကသေးတယ် စောက်မွှေးတွေကတော့မည်းနက်နေတာဘဲ အောက်ပေးကောင်းတယ် လိုးလို့ကောင်းတယ်မင်းတို့ကပြောချင်တာဘဲသိကြတယ် လီးကြီးမှကြိုက်တာသူက လီးကြီးကြီး ရေလျှံလျှံဆို အလိုးခံတဲ့ကောင်းမကွ အားးးးးးးအားးးးငါတောင်ပြောရင်းနဲ့၃ကြောင်းလေက်ပီးသွားပီ သူပုံကိုကြည့်ပီးဂွင်းထုလိုက်တာကိုပြောတာနော်ဟဲဟဲ...မလိုးနိုင်ကြသေးသရွေ့မိုးဟေကိုပုံသာ ကြည့်ပီးမှန်းထုကြဟေ့
စောက်ကောင်မEi phu pyoနင်ကအောဆိုဒ်ထဲလာပီးဆရာကြီးလိုလိုလာမလုပ်နဲ့ နင်လည်းစောက်ဖုတ်အလိုးခံချင်လို့ဒီလိုနေရာတွေကပုံတွေလာကြည့်တာ ဒါမျိုးရိုးနေပီ နင်ပါမိုးဟေကိုနဲ့ရောပီးလိုးပစ်လိုက်မယ် အခြေအနနားလည်းကောင် ငါလီးက၇ လက်မလောက်ရှိတယ် နင်လည်းစောက်ဖုတ်ပြဲသွားလိမ့်မယ်သတိထားဟတရားလာမဟောနဲ့
aungko zaw January 16, 2015 at 7:12 AM
သဘာဝတရားပါ သတိနဲ့ကြည့်ပါ သုံးသပ်ပါ
kyarlay waylay February 5, 2015 at 7:33 PM
Anonymous March 13, 2015 at 5:33 AM
မမမိုးဟေကို အောင်မြင်မူတွေတပွေ.တပိုက်ကြီးရပါစေနော် အမ
Rocker Zaw Gyi February 18, 2016 at 9:51 AM